箴言 31 CCB – Mmɛbusɛm 31 ASCB | Biblica
箴言 31 CCB – Mmɛbusɛm 31 ASCB
1Ɔhene Lemuel nsɛm a ɛyɛ nkɔmhyɛ a ne maame kyerɛɛ no:
2Ao me babarima, me yafunu ba,
Ao mebɔhyɛ ba,
3nsɛe wʼahoɔden wɔ mmaa31.3 Saa mmaa yi yɛ mmaa adwamanfoɔ a wɔwɔ ahemfie a wɔbɛtumi atwe ɔhene adwene afiri nʼadwuma so. ho,
wɔn a wɔgu ahemfo asu no.
4Lemuel, nsã nyɛ mma ahemfo;
asanom nyɛ mma ahemfo,
ɛnsɛ sɛ sodifoɔ pere nsaden ho;
5sɛ wɔnom nsã a, wɔn werɛ bɛfiri deɛ mmara no ka,
na wɔn a wɔdi wɔn nya no rennya deɛ wɔwɔ ho ɛkwan.
6Fa nsaden ma wɔn a wɔresɛe,
na fa nsã ma wɔn a wɔwɔ amanehunu mu;
7Momma wɔnnom, na wɔn werɛ mfiri wɔn hia
na wɔnnkae wɔn awerɛhoɔ bio.
8Kasa ma wɔn a wɔntumi nkasa mma wɔn ho,
kasa ma mmɔborɔfoɔ yiedie.
9Kasa na bu atɛntenenee;
kasa ma ahiafoɔ ne onnibie yiedie.
Awieeɛ: Ɔyere A Ɔsom Bo
10Ɔyere pa, hwan na ɔbɛnya?
Ɔsom bo pa ara sene nhwene pa.
11Ne kunu wɔ ne mu ahotosoɔ pa ara
na biribiara a ɛwɔ boɔ nhia no.
12Ɔde deɛ ɛyɛ brɛ no, na ɛnyɛ ɔhaw,
ne nkwa nna nyinaa mu.
13Ɔhwehwɛ odwannwi ne asaawa
na ɔde ne nsa nwono wɔ fɛ so.
14Ɔte sɛ adwadifoɔ ahyɛn,
ɔde ne nnuane firi akyirikyiri ba.
15Adeɛ nnya nkyeeɛ no na wasɔre;
ɔsiesie aduane ma nʼabusuafoɔ
16Ɔdwene afuo ho, na ɔtɔ;
ɔfiri deɛ ɔnya mu yɛ bobefuo.
18Ɔhwɛ sɛ nʼadwadie ho wɔ mfasoɔ,
na ne kanea ɛnnum anadwo.
20Ɔgo ne nsam ma ahiafoɔ
na ne nsa so onibie so.
21Sɛ sukyerɛmma tɔ a ne yam nhyehye no wɔ ne fiefoɔ ho;
ɛfiri sɛ wɔn nyinaa wɔ aduradeɛ a wɔde ko awɔ.
na ɔfira nwera ne serekye ntoma.
23Ne kunu wɔ animuonyam wɔ kuropɔn ɛpono ano,
baabi a ɔne asase no so mpanimfoɔ tena.
24Ɔpempam nwera ntadeɛ tontɔn,
na ɔtu abɔwomu ma adwadifoɔ.
25Ɔwɔ ahoɔden ne animuonyam;
na ɔnsuro nna a ɛwɔ nʼanim.
na nokorɛ nkyerɛkyerɛ wɔ ne tɛkrɛma so.
27Ɔhwɛ ne fidua mu nnwuma so
na ɔnnyegye aniha so.
ne kunu nso saa ara, na ɔkamfo no sɛ,
29“Mmaa pii yɛ nneɛma a ɛwɔ edin,
na wo deɛ, wosene wɔn nyinaa.”
30Ɔbaa kɔnɔfoɔ yɛ nnaadaa, na ahoɔfɛ twam ntɛm so;
nanso ɔbaa a ɔsuro Awurade no fata nkamfoɔ.
31Fa abasobɔdeɛ a wanya no ma no,
na wɔnkamfo ne nnwuma wɔ kuropɔn ɛpono ano.
ASCB : Mmɛbusɛm 31